Petro Nhoma a Ɛto So Abien 2:1-22
Akyerɛkyerɛfo atorofo bɛba (1-3)
Akyerɛkyerɛfo atorofo atemmu bɛba ɔkwan biara so (4-10a)
Watow abɔfo bɔne agu Tartarus (4)
Nsuyiri; Sodom ne Gomora (5-7)
Akyerɛkyerɛfo atorofo suban (10b-22)
2 Ne nyinaa mu no, atoro adiyifo nso sɔree wɔn mu, na saa ara na akyerɛkyerɛfo atorofo bɛsɔre mo mu.+ Wobewiawia wɔn ho abɛtetew akuw a edi awu, na wɔbɛka sɛ wonnim wɔn wura a ɔtɔɔ wɔn+ no mpo, na wɔn ankasa de ɔsɛe bɛba wɔn ho so ntɛm. 2 Bio nso, nnipa pii bɛbɔ ahohwibra,*+ na wɔn nti nkurɔfo bɛka nokware kwan no ho nsɛmmɔne.+ 3 Afei anibere nti, wɔnam adɛfɛdɛfɛsɛm so bedidi mo ho. Nanso wɔn atemmu a ɛda hɔ retwɛn wɔn fi tete+ no, ɛrenka akyi, na wɔn sɛe bɛba ɔkwan biara so.*+ 4 Nokwarem, Onyankopɔn amma abɔfo a wɔyɛɛ bɔne+ no amfa wɔn ho anni; mmom ɔtow wɔn guu Tartarus,*+ na ɔde nkɔnsɔnkɔnsɔn kyekyeree wɔn guu sum kabii mu* de wɔn sie maa atemmu.+ 5 Na wamma tete wiase no amfa wɔn ho anni;+ mmom bere a ɔde nsuyiri bɛsɛee amumɔyɛfo wiase no,+ ɔkoraa Noa a ɔkaa trenee ho asɛm kyerɛɛ nkurɔfo+ no ne nnipa baason+ so. 6 Ɔmaa Sodom ne Gomora nkurow no dan nsõ de buu wɔn fɔ,+ na ɛbɛyɛɛ nea ɛbɛba daakye ho sɛnnahɔ maa amumɔyɛfo.+ 7 Na ogyee ɔtreneeni Lot+ a mmaratofo no ahohwibra* maa ne ho hiahiaa no no, 8 efisɛ da biara da, nneɛma bɔne a ɔtreneeni yi hui na ɔtee bere a ɔte wɔn mu no maa ne kra* a ɛteɛ no ho yeraw no. 9 Eyinom nyinaa kyerɛ sɛ Yehowa* nim sɛnea obegye wɔn a wɔde onyamesom pa tena ase no afi sɔhwɛ mu+ na wakora abɔnefo so ama atemmu da na wasɛe wɔn,*+ 10 ne titiriw no, wɔn a wɔde ayɛ wɔn adwuma sɛ wobegu nkurɔfo ho fĩ+ na wobu tumidi animtiaa*+ no. Wɔyɛ anuɔdenfo, na wodi wɔn koko so asɛm; wonsuro anuonyamfo, na mmom wɔka wɔn ho nsɛmmɔne, 11 nanso abɔfo a wɔwɔ ahoɔden ne tumi sen wɔn mpo mfa kasatia mmu wɔn atɛn, efisɛ wɔwɔ obu ma Yehowa.*+ 12 Saa mmarima yi de, wɔte sɛ mmoa a wonni adwene a atenka na wɔde yɛ ade; wɔn de ara ne sɛ wɔbɛwo wɔn ma wɔakyere wɔn akum wɔn. Mmarima yi kasa tia nneɛma a wonnim.+ Ɔsɛe kwan a wɔn ankasa nam so no, ɛno ara na ɛde ɔsɛe bɛbrɛ wɔn, 13 na wobenya wɔn kwammɔne so akatua. Afɛfɛde a wɔde begyigye wɔn ani awia ketee na wɔn ani gye ho.+ Wɔyɛ nkekae ne dɛm wɔ mo mu, na nea ɛyɛ wɔn dɛ* ara ne sɛ bere a wɔne mo bom didi no, wɔde atoro nkyerɛkyerɛ bɛdaadaa mo.+ 14 Wɔwɔ aniwa a awaresɛe ahyɛ no ma,+ na wontumi nkwati bɔne, na wɔto wɔn* a wɔn ase ntimii no brada. Anibere ahyɛ wɔn koma ma. Wɔyɛ mma a wɔadome wɔn. 15 Wɔafi ɔkwan a ɛyɛ tẽẽ no so; wɔadaadaa wɔn. Wɔafa Beor ba Baalam+ kwan so; ɔno na na ɔreyɛ bɔne de apɛ akatua,+ 16 nanso wɔdaa ne mmarato adi kyerɛɛ no.+ Aboa a ontumi nkasa de onipa nne kasae, na osiw odiyifo no nkwaseasɛm no kwan.+ 17 Eyinom yɛ asubura a nsu nnim ne suwusiw a ahum kɛse bɔ no; wɔakora esum kabii so ama wɔn.+ 18 Wɔkeka nsɛm akɛse a mfaso biara nni so, na wɔde ɔhonam akɔnnɔ+ to nkurɔfo brada, na wɔbɔ ahohwibra* de twetwe wɔn a afei na wɔatetew wɔn ho afi nnebɔneyɛfo ho no.+ 19 Wɔhyɛ wɔn bɔ sɛ wɔbɛma wɔade wɔn ho, nanso wɔn ankasa yɛ ɔporɔw nkoa;+ efisɛ sɛ obi di ɔfoforo so a, onii no bɛyɛ n’akoa.*+ 20 Asɛm no ne sɛ, bere a wɔnam Awurade ne Agyenkwa Yesu Kristo ho nokware nimdeɛ so atetew wɔn ho afi wiase no fĩ ho+ no, sɛ wɔsan de wɔn ho kɔhyɛ nneɛma koro no ara mu ma ɛde wɔn yɛ nkoa a, ɛma wɔn tebea no sɛe koraa sen kan de no.+ 21 Sɛ wonnim trenee kwan no a, anka eye mmom sen sɛ wɔabehu na afei wɔatwe wɔn ho afi ahyɛde kronkron a wɔn nsa aka no ho.+ 22 Wɔma bɛ yi yɛ nokware sɛ: “Ɔkraman asan kɔ ne fe ho, na prako a wɔaguare no asan akɔyantam atɛkyɛ mu.”+
^ Anaa “bɛyɛ aniwude.” Efi Greek asɛmfua a·sel′gei·a mu. Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
^ Nt., “rentɔ nko.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “ɔde wɔn guu sum kabii abon mu.”
^ Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ, “Ɔkra.”
^ Nt., “watwa wɔn afi hɔ.”
^ Anaa “wɔmfa atumfo nyɛ hwee.”
^ Anaa “nea ɛma wɔn ani gye boro so.”
^ Anaa “wɔyɛ aniwude.” Efi Greek asɛmfua a·sel′gei·a mu. Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
^ Anaa “biribi di obi so a, ɔbɛyɛ dekode no akoa.